Best CFA Review Courses & လေ့လာမှုပစ္စည်းများ [ထိပ်တန်း5Picks of 2018]
အကောင်းဆုံး CFA လေ့လာမှုပစ္စည်းများ – ထိပ်တန်း5နှိုင်းယှဉ်မှု
23 သြဂုတ် အကောင်းဆုံး CFA လေ့လာမှုပစ္စည်းများ – ထိပ်တန်း5နှိုင်းယှဉ်မှု
Posted at 22:50h တွင် Financial, CFA အားဖြင့် Bryce Welker, တကြ် CPA0မှတ်ချက်များ
ယင်းထိပ်တန်းသုတေသနအောက်တွင် Click5Best Chartered Financial Analyst (CFA®) Exam Review Courses & ၏အွန်လိုင်းလေ့လာပစ္စည်းများ 2018
#1: Wiley CFA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
#2:့Prep CFA လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်
#4: Analyst,့Prep CFA
#5: ဘလွန်းဘာ့ဂ် CFA
အကောင်းဆုံး CFA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်းအမှတ်စဥ်လျှော့စျေး & အထူးနှုန်းများကုဒ်များ
Wiley CFA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း SAVE $195 OFF!
ယူ 10% AdaptPrep CFA အဆင့် OFF 1, 2, နှင့်3အပြီးအစီးသင်တန်းများ!
CFA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်းများ လျှော့စျေး လေ့ကျင့်သည်
Wiley CFA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်း $1295 4,000+
ဘလွန်းဘာ့ဂ် CFA ExamPrep $999 8,000+
Choosing the best CFA ™စာမေးပွဲတွင်လေ့လာမှုပစ္စည်း အဆိုပါဖြစ်နိုင်ပါတယ် most important decision you will make on your journey towards becomingaChartered Financial Analyst.
သငျသညျလေ့လာနေနာရီပေါင်း 100 ရဲ့ဖြုန်းပါလိမ့်မည်, so it’s crucial to find the course that best fits your learning style and background.
ဒီတော့ဒီမှာသတငျးကောငျးင် – သငျသညျမှရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်အပေါငျးတို့သ CFA ™စာမေးပွဲတွင် prep သင်တန်းသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြ! The comparison chart below will help you determine which course best fits your needs.
Wiley CFA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်း
့ Prep CFA့Prep သင်တန်းအမှတ်စဥ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်
Apptuto CFA လေ့လာမှုပစ္စည်းများ
Analyst,့Prep CFA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်း
ဘလွန်းဘာ့ဂ် CFA လေ့လာမှုပစ္စည်းများ
အကောင်းဆုံး CFA ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်း
လျှော့စျေး Show ကိုကူပွန် Show ကိုကူပွန်
အွန်လိုင်းကိုယ်ပိုင်လေ့လာ & Virtual Classes
အွန်လိုင်းအသကျရှငျ, App ကို, အွန်လိုင်း
အွန်လိုင်း, App ကို
အဆင့်2Course options
အဆင့်3Course options
Unlimited Access ကို: You’ll get all the access you need to Wiley CFA course materials. Not only do you have access to the course until you pass, အားလုံးအကြောင်းအရာ updates များကို, သင်တန်းအပြောင်းအလဲများနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအဆင့်မြှင့်အခမဲ့များမှာ. These are great features foraCFA course; အများဆုံးအခြားကုမ္ပဏီများဒီတော့ရက်ရက်ရောရောမရဖြစ်ကြပြီး access ကိုပုံမှန်အားဖြင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုနေ့၌ပြီးဆုံး, ပြီးနောက်သင်ကံကောင်းပါစေထဲကဖြစ်နိုင်.
အသေးစား-size သင်ခန်းစာများ: Wiley ပစ္စည်းရှိတစ်ဦးအလွန်ကြီးမားသောငွေပမာဏဟာ CFA စာမေးပွဲအဘို့ကိုဖုံးလွှမ်းရန်သိတယ်, ဒီသင်တန်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့စုံစုံသင်ခန်းစာများသို့ဖွဲ့စည်းအဘယ်ကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည်. Shorter lessons allow you to stay engaged (နိုး), အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုမဟုတ်တော့ကာလအတွက်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်, and better monitor your progress.
စာမေးပွဲအစီအစဉျ: သငျသညျအစာရှောငျလုံလောကျသင်တန်းပစ္စည်းအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းဖို့ဘယ်လိုစိတ်ပူရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ဖြစ်ဘူး! Wiley ရဲ့စာမေးပွဲ Planner ကသင်သည်သင်၏စာမေးပွဲတွင်၏ရက်စွဲရိုက်ထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်နှင့်သင်စမ်းသပ်သည်အထိနေ့ရက်တိုင်းကိုလေ့လာဖို့ဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တစ်စိတ်ကြိုက်လေ့လာမှုအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးသွားမှာပါ.
အရည်အသွေးပစ္စည်း: Wiley ရဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်အကြောင်းအရာ updates များကိုသင်အမြဲလတ်တလောလာပြီဖြစ်ကြောင်းဆိုလို, အဆိုပါ CFA အဆင့်များအတွက်သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ 1 စာမေးပွဲ. အတွေ့အကြုံရှိသင်တန်းပို့ချခြင်းဖြင့် top-ထစ်ပို့ချချက်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စာဖြင့်ရေးသားလမ်းညွှန်, သည်သင်ယူခြင်းရလဒ်ဖော်ပြချက်များပါဝင် (THE) in the CFA exam curriculum make this one of the most comprehensive courses on the market.
WILEY CFA ခေါ်သွား
Bite-Sized Video Lectures: The instructors short and to-the-point video lectures only average about 10 မိနစ်အသီးအသီး! သငျသညျမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်လိမ့်မယ် 40+ သင်ပိုမိုထိရောက်စွာသတင်းအချက်အလက်သင်ယူထိန်းသိမ်းထားနိုင်အောင်အချိန်ပိုပြီးစီမံခန့်ခွဲတုံးသို့ဆင်းချိုးပြီအဲဒီအဆင့်နှုန်းညွှန်ကြားချက်နာရီ.
ခေါင်းစဉ် Mastery တုံ့ပြန်ချက်: Our Topic Mastery report provides feedback assessing your preparation for your next CFA Level I exam. Topic Mastery serves asaguide to your preparation. We encourage candidates to dedicate more time to topics that need more improvement. With Topic Mastery, သင်ပိုမိုထိရောက်စွာလေ့လာလို့ရပါတယ်.
အစာရှောင်ခြင်း Loading Speed: Adapt Prep has worked hard to make the their course software and videos load faster in terms of response time. They’ve added additional databases and servers to ensure that you won’t be bogged down due to video buffering or lag time. As we tested out their course we were amazed at how quickly the software performs.
တတ်နိုင်စျေး: AdaptPrep CFA is the best bang for your buck prep course on the market. Their Complete course package costs less than half as much as the industry average making them the most affordable comprehensive CFA study materials you will find anywhere
prep adapter ခေါ်သွား
ကျယ်ပြန့်မေးခွန်းဘဏ်: Apptuto gives you access to 3,000+ မေးခွန်းများနှင့်အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်. အားလုံးမေးခွန်းများကို CFA အရည်အချင်းများကိုင်ဆောင်သူကရေးသားနေကြသည်. သူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အလားတူမေးခွန်း Generator ကိုသင်အများဆုံးကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်အတိအကျအဲဒီမေးခွန်းတွေအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ခွင့်ပြု.
စိတ်ကြိုက်လေ့ကျင့်စမ်းသပ်မှုအရေအတွက်: Create as many practice tests as you want with questions chosen from specific readings, ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို-type အမျိုးအစားသို့မဟုတ်အခက်အခဲအဆင့်အားဖြင့်၎င်း, ထို့နောက်သူတို့သည်သင်၏အလေ့အကျင့်စာမေးပွဲတွင်အပေါ်မာန်တင်းထားရမည်ကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်. သင်သင်တန်း၌သင်တို့၏တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံနေစဉ်သင်တန်းဒိုင်ခွက်ပေါ်မှာစမ်းသပ်မှုပေါ်တွင်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစစ်ဆေးနှင့်သင်သည်သင်၏ရွယ်တူချင်းဆန့်ကျင်အထိတိုင်းတာပုံကိုကြည့်ပါ.
အဆင့်မြင့်သင်တန်း Analytics မှ: အဆိုပါသင်တန်းကိုဒက်ရှ်ဘုတ်သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အသေးစိတ်တုံ့ပြန်ချက်ကိုထောက်ပံ့ပေး. သင့်ရဲ့အလုံးစုံစာကျွမ်းကျင်မှု Check, တိုးတက်မှုအချက်များ, ဦးဆောင်သူအဆင့်, သင့်ရဲ့ဆုတံဆိပ်သို့မဟုတ်အောင်မြင်မှုများ, the number of questions you’ve attempted, နှင့်မေးခွန်းများကို၏ရာခိုင်နှုန်းသင်သည်မှန်ကန်စွာဖြေကြားပါတယ်, အလုံးစုံတို့သည်တခုတည်းသောဗဟိုတည်နေရာမှ. စွမ်းဆောင်ရည်ဇယားကိုလည်းသင်၏အပတ်စဉ်စမ်းသပ်မှုရမှတ်ည့်ကျဇယား.
အသက်ရှင်နေထိုင်-အွန်လိုင်းသင်တန်းများ: Apptuto now offers Live-Online courses for CFA Level 1 နှင့် II ကိုစာမေးပွဲနှင့်အဆင့်လွှတ်ပေးရန်အစီအစဉ်3အစောပိုင်းအတွက် 2017. Their Premium Course offers 54 hours of live-online CFA classes over an 18 ရက်သတ္တပတ်ကာလနှင့်လည်းပါဝင်သည် 1 အပေါ် 1 coaching with the instructor as well asa100% အာမခံဖြတ်သွား. You also have the option to take the Intense course which includes over 100 တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားချက်နာရီ.
တတ်နိုင်: CFA review courses can be pricy, Analyst,့Prep သာ၎င်း၏သင်တန်းတစ်ခုဗားရှင်းကမ်းလှမ်းဘာဖြစ်လို့ရဲ့ $129. သင်တို့ရှိသမျှသည်အလေ့အကျင့်မေးခွန်းများကိုရလိမ့်မယ်, လှောင်ပြောင်စာမေးပွဲ, ဗီဒီယိုကသင်ခန်းစာများ, ကုန်ကျစရိတ်၏အစိတ်အပိုင်းအဘို့နှင့်ပိုပြီး.
ဘက်စုံလေ့လာမှုမှတ်စုများ: Analyst Prep provides you with study notes that guide you toward the most important topics that are outlined in the Candidate Body of Knowledge (CBOK). လေ့လာမှုမှတ်စု၏လွယ်ကူသော-to-ဖတ်ပါ format ကိုသငျသညျထိထိရောက်ရောက်နဲ့ထိရောက်စွာပစ္စည်း၏တောင်နားလည်ကူညီပေးပါမည်.
1 အပေါ် 1 ထောက်ပံ့: အဆိုပါနည်းပြအထုပ်နှင့်အတူ, သငျသညျရပါလိမ့်မယ်5သင့်ရဲ့လေ့လာမှုအစီအစဉ်နှင့်သင်ယူမှု၏အခြားရှုထောင့်နှင့်အတူကူညီနိုင်မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနည်းပြဆရာနှင့်အတူနာရီ. သင်အဘို့အရွေးချယ်ကြဘူးဆိုရင်တောင် 1 အပေါ် 1 နည်းပြ, သငျသညျမေးခွန်းများမေးခြင်းနှင့်အဖြေကိုရှာတွေ့ရန်အဘို့အအွန်လိုင်းမှအသိုင်းအဝိုင်းဖိုရမ်ရှိ.
performance Stats ကတော့: Analyst Prep’s course comes with performance tracking so you can study the best way possible. သငျသညျကိုရှငျးရှငျးလငျးလငျးသင့်ရဲ့အားနည်းသောဒေသများတွင်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာခေါင်းစဉ်ကြည့်ဖို့အတှကျ built-in software ကိုသူတို့အားစမ်းသပ်မေးခွန်းများကိုအားဖြင့်သင်တို့၏တိုးတက်မှုခြေရာခံများနှင့်ရမှတ်များ.
top-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်သင်တန်းပို့ချ: The instructors with this course are top-rated and extremely knowledgeable. ထိုကြောင့်ကျွမ်းကျင်မှု, သငျသညျသင်ယူဖို့တာပေါ့အရာအားလုံး CFA များအတွက်လေ့လာနေမည်သူမဆိုရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းနောက်ဆုံးပေါ်အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်နဲ့အညီဖြစ်ပါတယ်. ဘလွန်းဘာ့ဂ်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအဆိုပါကျူရှင်န်ဆောင်မှုထိပ်ကိုကျော်ဒီသင်တန်းကိုထည့်လေ့မရှိဘာတွေလုပ်နေလဲ, ကများစွာသောအခြားကုမ္ပဏီများမှမပူဇော်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုရဲ့အဖြစ်.
အလိုက်သင်ယူနည်းပညာ: ဘလွန်းဘာ့ဂ်ကိုသင်တို့သည်ကြီးစွာသောသင်ယူမှုအတှေ့အကွုံပေးရ State-Of-The-Art နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်. ကနဦးအကဲဖြတ်ကာလပြီးနောက်, သင်တန်းသင်တို့ကိုနှောက်ယှက်နေသောဒေသများ၏ထားတဲ့အထဲကပုံပါလိမ့်မယ်, နှင့်အညီသင့်ရဲ့လေ့လာမှုအစီအစဉ်ကို adjust. သည်အခြားသင်တန်းများညှိနှိုင်းမှုယန္တရားများရှိစေခြင်းငှါနေစဉ်, ဘလွန်းဘာ့ဂ်ရဲ့ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. အတွက်အကောင်းဆုံးတို့တွင်.
dashboard ကို: Because Bloomberg has resources that aren’t available to many prep companies, ယင်း၏နည်းပညာအထက်နှင့်၎င်း၏ယှဉ်ပြိုင်မှုမဆို၏ကျော်လွန်ဖြစ်ပါသည်. ဒီ CFA ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းအတွက်ဒိုင်ခွက်မတူနိုင်တဲ့ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးရှိအောင်နှစ်သက် home page ကိုနှင့်အတူကြွလာအဖြစ်, တစ်လျှောက်လုံးအကြီးအက web design ကို, လွယ်ကူ-to-လမ်းကြောင်းရှာရန် headers နှင့် dropdown menu.
CFA, Wiley CFA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, သီးသန့်လျှော့ 36 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
CFA 35 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
CFA Exam Results are Out. Jumpstart your studies for 2019 with Wiley. ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $195 OFF on your Wiley CFA Platinum and Gold Review Course until September 30, 2018 with code EXAMREADY.
နောက်ဆုံးအသုံးပြု6လွန်ခဲ့သောမိနစ်အနည်းငယ်က
CFA,့Prep CFA လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်, သီးသန့်လျှော့ 40 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
CFA 38 ယနေ့ကိုအသုံးပြုသည်
ယူ 10% OFF AdaptPrep CFA Level 1, 2, နှင့်3ဒီ့ Prep Adapt ကူပွန်ကုဒ်နှင့်အတူအပြီးအစီးသင်တန်းများ!
အကောင်းဆုံး CFA လေ့လာမှုပစ္စည်းများ
ကရေးသား: Bryce Welker
Best FRM Study Materials – Top3နှိုင်းယှဉ်မှု
Wiley frm ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း